Administratera Sivily - andiany « HARENA »: Manahy kolikoly ny mpianatra sasany
lundi, 11 novembre 2019 19:46
Teo aloha ny fampidirana mpianatra ho Administratera Sivily (AC) eny aminy ENAM dia efa fantatra mialohan’ny fanadinana fifaninanana ny isan’ireo izay ilain’ny ministeran’ny Ati-tany (AC Intérieur) sy ny ministeran’ny Asam-panjakana (AC FOP).
Tamin’ny andiany roa farany izay nivoaka teny amin’ny ENAM anefa dia tsy nampiharina intsony io fizarana mialoha io satria noheritreretina fa tokony ho iray ihany ny Administratera Sivily, toy ny any amin’ny antokon-draharaha (Corps) hafa. Rehefa vita ny fiofanana roa taona eny aminy ENAM vao miroso amin'ny fizarana ny ministera roa tonta.
Raha ny andiany nivoaka taminy 2016 dia natao teo anelanelan’ny fivoahan’ny voka-panadinana sy ny famoahana ny andiany ny fitsinjarana ; izay hita fa dia ara-dalana. Nisy lisitra ofisialy mihitsy navoaka teny amin’ny ENAM mirakitra ny anaran’ireo mpianatra makany amin’ny Ati-tany sy ny FOP.
Tsy toy izay anefa no natao tamin’ny andiany HARENA (2017-2019). Rehefa nivoaka ny voka-panadinana farany dia natao ny famoahana ny andiany in-dray mihira taminy 11 oktobra 2019 teo, dia tsy mbola natao ny fitsinjarana. Herinandro vitsivitsy taorian’ny famoahana ny andiany vao nivory ny vaomiera hanao ny fitsinjarana (commission de répartition). Io vaomiera io dia ahitana ny solotenan’ny ministeran’ny Ati-tany sy ny ministeran’ny Asam-panjakana. Tompon’andraikitra ambony ao amin’ny ministeran’ny Asam-panjakana no mitarika azy.
Rehefa natao ny fizarana dia tapaka fa 19 ny Administratera Sivily mandeha any amin’ny ministeran’ny Ati-tany ary 25 ny makany amin’ny ministeran’ny Asam-panjakana. Akory anefa ny hagagana fa hatramin’izao dia tsy mbola mahafantatra amin’ny fomba ofisialy ny mpianantra hoe : any amin’ny Ati-tany ve izy sa any amin’ny Asam-panjakana. Ny valintenin’ny tomponandraikitra dia ny hoe “confidentiel” hono ny fintsinjarana. Ny hany fomba nahafantaran’ny tsirairay ny toerany dia tany amin'ny ministeran’ny vola, amin’ny fikarakarana ny « nomination dans le corps des administrateurs civils ».
Ny minisitera roa tonta dia tsy mametraka mason-tsivana mazava aminy fizarana. Tsy fantatra izany hoe : Administratera Sivily toy inona no ilain’ny Ati-tany, na toy inona no ilain’ny Asam-panjakana. Ny rehetra anefa dia mieritreritra fa Administratera Sivily “ambony” ny any amin’ny Ati-tany ary Administratera Sivily “ambany” ny any aminy Asam-panjakana ; hany ka misafidy ny te ho any amin’ny Ati-tany daholo ny rehetra. Tsy arak’izay anefa fa dia misy mpianatra any amin’ny rambony eo aminy voka-panadinana farany, nefa dia lasa any amin’ny Ati-tany, fa misy kosa ny mpianatra izay hita fa loha-laharana tamin’ny fahazaina, nefa dia alefa any amin’ny Asam-panjakana .
Eo no mipetraka ny ahiahin’ny maro, fa maninona no atao « confidentiel » ny fizarana, izay tsy mbola nisy hatramin’izay hatraminy naha ENAM ny ENAM ?
Fa ny tena mahavaky vava ny maro dia mpianatra iray, izay namerin-taona tany amin’ny taona voalohany ny faha-19 ny iray amin’ireo Administratera Sivily miisa 19 makany amin’ny Ati-tany. Io mpianatra io anefa dia sady tsy tao anatin’ny lisitra nivoaka tamin’ny fanadinana famaranana ny anarany, no tsy anisan’ireo mpianatra 44 notolorana diplaoma tamin’ny lanonana ofisialy famoahana ny andiany HARENA.
Anisan’ny antotan-taratasy ilaina amin’ny fikarakarana ny “nomination dans le corps” ny dika mitovy voamarina ny diplaoma. Taiza izany no nahazoan’io mpianatra io ny dipilaomany, izy rahateo amin’izao fotoana izao dia mbola mianatra miaraka amin’ireo andiany zandriny eny amin’ny ENAM.
Manahy mafy amin’ny fisiana kolikoly avo lenta noho izany ireo Administratera Sivily sasany mandrafitra ny andiany HARENA. Mba fantatry ny minisitry ny Ati-tany Razafimahefa Tianarivelo sy ny minisitry ny Asam-panjakana Ranampy Gisèle ve izao toe-draharaha izao?
Marihina fa “Promotion MADIO” no anarana isalorany ny promotion ny Administratera Sivily izay mbola mamita ny fianaran’izy ireo eny aminy ENAM amin’izao fotoana izao. Dia ho sanatria ve ka “Promotion Maloto” ny « promotion HARENA?
Mampametra-panontaniana ihany ny hoavin’ny fitantanan-draharaham-panjakana Malagasy raha izao fandehany izao.